China SPC Ft 503 Nlụpụta na Factory | N'akụkụ
Nkọwapụta: 1210 * 183 * 5mm
Chazụ na ntụnye
1. Ọ ka mma ịhọrọ ngwaahịa na ọkpụrụkpụ nke 5mm ma ọ bụ karịa.
2. Ọ bụrụ na ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ ka mma imefu ego iji zụta ụfọdụ (ị chere na ọnụahịa ahụ kwesịrị ekwesị) ihe atụ maka ntụnyere, iji hụ ma etu ụdị ederede siri dị oke ala, wee tinye ihe nlele niile n'ime igbe akara iji hụ nke nwere obere ekpomeekpo (vinyl chloride nwere isi ọma yiri ether, ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ dị ka ire rere ure ma ọ bụ slippers roba?)
3. Agbagọ ike. Ọ bụrụ na ihe PVC dị mma, ọ dị mfe ịgbake ma ọ dịghị mfe ịmegharị.
4. Zụta ọtụtụ mpempe akwụkwọ ájá nke nkọwapụta dị iche iche (ntupu 600, ntupu 300, ntupu 180, nke pere mpe bụ, ọ na-akawanye njọ), ma mee ka ha dị ọcha na nlele iji hụ ụdị nlele na-adịgide adịgide.
5. Lelee akwụkwọ nyocha ule gburugburu ebe obibi nke chịngọm ma ọ bụ nrapado.
6. Pịa elu na a skru sikruuokwomoto na-ahụ mmetụta nke resili na mmetụta-eguzogide.
"SPC floor" na-ezo aka n'ala nke ejiri ihe SPC mee. Kpọsị, SPC na copolymer resin na-eji dị ka isi ngwaọrụ, fillers, plasticizers, stabilizers, agba na ndị ọzọ inyeaka ihe na-agbakwunyere, nke na-emepụta na mpempe akwụkwọ na-aga n'ihu mkpụrụ site mkpuchi usoro ma ọ bụ site calendering, extrusion ma ọ bụ extrusion usoro.
SPC ala bụ nnọọ ewu ewu ọhụrụ ụdị fechaa n'ala mma ihe onwunwe na ụwa, a makwaara dị ka "fechaa n'ala". Ọ bụ ngwaahịa a ma ama na Japan na South Korea na Europe, America na Asia. Ọ bụ ewu ewu na mba ofesi na ọtụtụ-eji, dị ka ime ụlọ ezinụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ mmepụta ihe, ọha na eze, Ahịa, ulo oru, ámá egwuregwu na ebe ndị ọzọ.
N'ozuzu Oke 5mm
Nkọwapụta nha 1210 * 183 * 5mm
Nke gara aga: SPC Ala 502
Osote: SPC Ala 1901
Ogige SPC 507
SPC Ala 505
Ogige SPC 506
SPC Ala 502